”Doorashadu waa ku celis haddii kale waa DAGAAL SOKEEYE!” – Siyaasiyiin waawayn & dhaqdhaqaaqyo Trump kula taliyey inuu soo rogo xukun millateri dastuurkana xannibo | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka ”Doorashadu waa ku celis haddii kale waa DAGAAL SOKEEYE!” – Siyaasiyiin waawayn...
(Washington, DC) 03 dIS 2020 – Maalmo uun kaddib markii uu MW Trump, u cafiyey si muran dhalisay, wuxuu la taliyihii hore ee Amaanka Qaranka Mike Flynn oo ah jeneraal ciidamada ka howlgabay ugu baaqay inuu hakad geliyo dastuurka oo uu soo rogo xaalad deg deg ah oo ay howsha la wareegayaan millaterigu si loogu celiyo doorashada uu kusoo baxay Joe Biden.
Flynn, oo qirtay inuu been uga sheegay FBI arrimaha Ruushka xilligii kala guurka, ayaa Trump, oo doorashada ku tilmaamay ”mid lagu shubtay” u sheegay inuu ciidamada ka adeejiyo doorasho ku celis ah, isagoo soo wadaagey lana qaba bayaan kasoo baxay We the People Convention oo lagu daabacay Washington Times.
Kooxdan oo ay isku ra’yi yihiin ayaa bayaanka ku qoray in MW Trump uu adeegsado Xeerka 12-aad kaddib markii sida ay yiraahdeen uu Koongaraysku xilkiisii gudan waayey, isla markaana lasoo rogo xukun millateri oo xadidan, isla markaana la xannibo xukunka madaniga ah ee doorashada federaalka ah muddo gaaban, si ay millaterigu doorashada ula socdaan, sida uu qoray Tom Zawistowski, madaxa kooxdan oo la shaqeeysa Ohio Tea Party.
Waxay tusaale usoo qaateen sidii uu MW Abraham Lincoln uu dastuurka u xannibay intii lagu jirey Dagaalkii Sokeeye ee Maraykanka, iyagoo soo jeediyey in doorashada warqado lagu qabto oo aan kombiyuutar la adeegsan isla markaana gacanta lagu wada tiriyo iyadoo ay eegayaan wakiillo ka socda labada xisbi. ”Waa in uu qof kasta sitaa aqoonsi” ayay qoreen iyagoo dhaliilay maxkamadaha Maraykanka iyo siyaasiyiinta oo ay musuq ku tilmaameen.
Waxay Trump usoo jeediyeen inuu tillaabo qaado isla markaana uu joojiyo faaf-reebka sharci darrada ah ee sharikaadka tiknolojiyaddu wadaan, haddii taa lagu guulaysan waayana aanu dalku sii socon doonin ayna ka dhalan doonto fadqalallo iyo burbur gaarsiisan heerkii dagaalkii sokeeye ee Maraykanka.
”Xukun millateri oo xadidan ayaa dhaama dagaal sokeeye!” ayay sii raaciyeen.
Arrintan ayaa waxaa ugu yaab badan in jeneraal ciidamada ka tirsan oo hadda laga cafiyey dembi uu galay, welibana cafiska laftiisa la isku haysto uu ku baaqayo dagaal sokeeye haddii aan doorashada lagu celin.
Previous articleArag cabqariyaddii siyaasadeed ee Abraham Lincoln & inta sano ee ay u jirto midda cawaran ee Soomaalida
Next article”In ka badan 700,000 ayaan cunto iibsan karin” – DF Somalia oo meel xanuun badan ku dheggan Kenya & qayladhaan cusub